Ny tolakandron’ny sabotsy 2 novambra 2019 ity habibiana ity no nitranga. Nisy vehivavy telo nosamborin’ny Zandary, fa nahiahiana ho nitarika dahalo nanafika tao amin’ny toeram-pitrandrahana vato ao Ambohimirary ny volana septambra 2019. Nentina tao amin’ny « Poste Fixe » Ikalakao izy ireo. Nampandohalihan’ny zandary iray manana grady « 2ème Classe » teo an-tokontany izy ireo. Nosakanan’ny lehibeny tsy hanao io fihetsika io ilay zandary, fa tsy tana, ary vao maika notifiriny teo amin’ny lohany ny vehivavy iray fantatra amin’ny anarana hoe : Nomenjanahary Jeanne na Zesiana. Maty tsy tra-drano ity farany. Nosamborina, ary nalaina teny aminy ny basiny. Nosokafana avy hatrany ny fanadihadiana. Nakarina ao Ambohimahasoa ilay zandary nahavanon-doza.
Il est parti sans faire de bruit. Le Chef de l’Etat a quitté Antananarivo vendredi, fête de la Toussaint, à bord d’un jet privé à destination d’Abou Dabi. Andry Rajoelina prend part à la 18ème session de la Conférence générale de l’ONUDI (Organisation des Nations unies pour le développement industriel) qui se tient dans la capitale des Émirats arabes unis du 3 au 7 novembre 2019. Il rentre au pays demain lundi 4 novembre. C’est la seule chose que l’on sait. Le silence de la présidence est lourd de signification.
Olona miisa fito no nitsikomba tamin’ity halatra ity, misy mpiasan’ny Jirama, miaraka amina sivily mpiambina sy mpiasana orinasa tsy miankina eo manodidina. Gazoala voatsinjara tamina daba kely 11 isa no efa voaomana hobataina no nisy nahatsikaritra, ka nampandre avy hatrany zandary. Efa voasambotra ny efatra ary nanokafan’ny Zandary fanadihadiana, ny telo efa nametrahan’ny mpitantana ny Jirama fitoriana.
Namoaka fanambarana ny fitantanana ny CNTEMAD fa dia hotanterahina ny 18 ka hatramin’ny 22 novambra ny fanadinana nasionaly. Tokony natao ny 21 hatramin'ny 25 oktobra 2019 io fanadinana io, saingy nifanindry tamin’ny andro nanatanterahana ny fihodinana faharoa manokana amin’ny fanadinana bakalorea ankapobeny, izay nanomboka alarobia ny 23 oktobra, ary ka hatramin’ny sabotsy 26 oktobra 2019. Ho an’ny teto Antananarivo manokana, dia sady foibem-panadinana bakalorea ny Lycée Moderne Ampefiloha (LMA) no foibem-panadinana amin’ny fanadinan'ny CNTEMAD ka izay no anton’ny nanemorana ny fanadinana, araka ny fanambarana nivoaka tamin’ny 8 oktobra 2019, ary dia izao nivoaka izao ny datim-panadinana.
Nandriaka rà teto Iajaky-Ambositra androany tokony ho tamin’ny iray ora tolakandro. Fiara 4x4 nentina vadina lehibena andrimpanjakana iray no nirifatra tampoka ka nifaoka mpivarotra amoron-dalana. Olona roa namoy ainy, ka tovolahy vao afaka bakalôrea teo ny iray, vehivavy bevohoka ny faharoa ; olona enina hafa naratra, ary tsaboina ao amin’ny hopitaliben'Ambositra. Nihodina an-dalana, no fahitan’ny olona ilay fiara 4x4, tampoka teo anefa dia niroso namantana tany anaty olona, fa hoe nifangaro ny fanitsahana ny hisatra sy ny fanafainganam-pandeha, ka izay no mety nampirifatra tampoka ilay fiara, ka nandona sy nanitsaka izay rehetra teny alohany. Andro tsena eto Ambositra rehefa sabotsy toy izao, betsaka ny olona mifamoivoy, somary teritery ihany koa ny nitrangan’ny loza. Nijery ireo naratra ny olomboafidy sy solontenam-panjakana eto Ambositra, handray an-tanana ny fitsaboana ireo maratra sy ireo niharam-boina ny fanjakana.
Olona roa, lahy sy vavy, no voasambotry ny Zandary avy ao amin'ny Kaompania Antsirabe, rehefa nokarohina andro maromaro. Voarohirohy amina fanondranana olona izy ireo. Mitady olona tena sahirana ara-pivelomana eto Antsirabe izy ireo, ary mivarotra izany amin'ny mpanam-bola, ka 40 tapitrisa ariary no hivarotany ny olona iray. Alainy am-pitaka moa ireo olona sahirana ireo, satria lazainy fa hoentina hikarama any Toamasina, ary omena karama 120 000 ar. Afaka mitondra vady amanjanaka. Noraisim-potsiny ireto mpanao ratsy, niaraka tamin'ny olona fito mianaka saika hamidy. Efa natolotra ny Fitsarana izy ireo, fa mbola mitohy ny fikarohana ireo mety ho namany.
Hatairana ny an’ny olona io maraina io, teny anaty ala kesika eny Ifarihy, Kaominina Ambatofotsy, Distrika Antananarivo Atsimondrano, nahita tovolahy herotrerony, mihatona eny ambony kesika, mifatotra amin’ny tendany. Manao fanamiana fitondra mihazakazaka izy, nefa kapa maivana « scoubidou » no eny an-tongony.
Dahalo iray maty, telo hafa naratra, raha nifanandrina tamin’ny Zandary tao Mangabe Kaominina Antanimenabaka, Distrika Andilamena, Faritra Alaotra-Mangoro, ny marainan’ny talata 29 oktobra 2019 tamin'ny 5 ora sy sasany. Dahalo am-polony no nanao andiany tamin’io, ka lavo tamin’izany i Mbaza na Shel. Nentin’ireo namany nitsoaka ireo naratra. Tavela ny basy kalachnikov iray, miaraka amin’ny fanafody gasy ary masolavitra fampiasan’ireo dahalo. Tsy nisy voakitika kosa ny mpitandro ny filaminana. (Jereo sary Tohiny)
Nisy nangalatra ny taribin-jiron’ny Jirama mirefy 2500 metatra amin’ny tambazotra vaovao, manana tanjaka 35KV, mitondra herinaratra miainga any Volobe manketo Toamasina. Androany 1 novambra 2019, tokony ho tamin'ny iray ora maraina tany ho any no nitrangan’ny halatra. Ahiana ny hisian'ny fahatapahan-jiro amin’ny faritra maromaro eto Toamasina noho ny tsy fahampian'ny herinaratra tonga eto an-toerana, noho ity fahabangana taribin-jiro ity. Am-perinasa ny teknisian’ny Jirama manolo ilay taribin-jiro ka vinavinaina ho vita anio alina ny asa. (Jereo Sary Tohiny)
Page 10 sur 490